IiPlatifomu zokuRhweba ze-Forex ezigqwesileyo-Yeyiphi eyona iGqwesileyo ngoMeyi ka-2022?
Awona maQonga okuRhweba nge-Forex-Leliphi iQonga lokuRhweba nge-Forex ligqwesileyo ngo-2021 nango-2022?
Esi sikhokelo sijonga kwakhona Iiplatifti ze-forex ezilungileyo kakhulu ngo-2021 kunye no-2022. Sithetha ngokukodwa ngokubaluleka kommiselo, iikhomishini, kunye nezibini ezithengisekayo-ukugqiba ngokuhamba ngendlela elula yokubhalisa kunye nokuqala ukuthengisa i-forex namhlanje.
Xa uthengisa i-asethi eguqukayo enje nge-forex, uyakufuna umrhwebi onokuthenga ngetyala ukulungiselela ukufikelela kwakho kule ndawo yentengiso. Ungakhankanyi ngebhonasi eyongeziweyo yamaqonga alawulwayo anikezela ukhetho lokufumana amandla.
Kukho amakhulu wabarhwebi be-intanethi abakwi-intanethi kwezi ntsuku. Nokuba kukusilela kwelayisensi, iifizi eziphezulu, okanye inani eliqingqiweyo leemarike ezixhaswayo-kunzima ukufumana into elungileyo ejikelezayo.
Iiplatifti zoRhwebo eziPhambili ze-2022 eziHlaziyiweyo
Xa usenza uphando kubarhwebi abaninzi abafumanekayo kwibala le-Intanethi, sivavanya izinto eziphambili.
Imirhumo kunye neekhomishini
Umgangatho wokuma-1 wokuma
Izibini ze forex ezikhoyo
Izixhobo zokuthengisa ezikhoyo
Ukusebenziseka kweqonga kunye nenkonzo yabathengi
Zonke ezi sixoxa ngazo ngakumbi emva kokuphonononga awona maqonga aphambili okurhweba kwangaphambili kwi2022 ye akho ingqalelo.
1. I-AvaTrade – Eyona platform yoRhwebo ye-Forex eneZixhobo ezininzi zoHlalutyo lobuGcisa
Njengawo onke amanye amaqonga orhwebo aphambili kuluhlu lwethu, i-AvaTrade ilawulwa kwaye inikezela ngeemfumba zeeasethi. Iimarike ezikhoyo zibandakanya amasheya, ii-cryptocurrensets, iimpahla kunye ne-forex Kukho ngaphezulu kwe-50 yezibini ezahlukileyo ze-forex onokukhetha kuzo kweli qonga, zigubungela izihloko ezikhankanywe ngasentla, abantwana, kunye neexotic. Ii-Majors ziza nokusasazeka okuphakathi kwee-0.9 iipips ezinokhuphiswano oluhle kwaye zonke zinokuthengiswa njengee-CFDs, ezenza ukuba kuthengiswe ngokufutshane kwaye kube namandla.
I-AvaTrade ilawulwa kwimimandla emithandathu. kwaye ugunyazisiwe ukusebenza kumazwe angaphezu kwe-6. Kananjalo, eli qonga lokuthengisa kwangaphambili libonelela ngenkxaso kwiilwimi ezininzi. Ngaphaya koko, umrhwebi ukhuthaza abantu ukuba bathengise ngokuzithemba ngokunikezela ngezixhobo ezinjenge-AvaProtect. Oku kuthetha ukuba umrhwebi uya kukubuyisela ngayo nayiphi na ilahleko eyenziwe kuthengiso xa kuphela ixesha 'lakho elikhuselweyo' liza kudlala.
Ungajonga iinkcukacha kunye nokuprinta okuhle kwesi sixhobo kwiqonga lokuthengisa ngokwalo. Xa isiza kumanqaku aluncedo ayipheleli apho. Eli qonga liphezulu le-forex libonelela ukufikelela kwizalathi zezoqoqosho kunye nezixhobo zokubala, izikhokelo ze-forex kunye nezifundo, 'imigaqo' yokuthenga kunye nokuthengisa, amaqhinga obuchwephesha, kunye nezalathi. Ngaphaya koko, ukuba ufuna ukusebenzisa iqonga lendawo ye-AvaTrade -akukho sidingo sokukhuphela isoftware.
Endaweni yokuba usebenzisa isikhangeli sakho sedesktop, unokujonga iakhawunti yakho, urhwebe i-forex, kwaye uthathe inxaxheba kurhwebo lwentlalo. Iakhawunti yedemo yasimahla eAvaTrade iza ilayishwe nge- $ 10,000 kwimali ebonakalayo kwaye inokusetyenziswa kuzo zombini iselfowuni kunye nedesktop. Ungaqala kwi-AvaTrade nge- $ 100 nje kwaye uxhase iakhawunti yakho ngedebit / ikhadi lekhredithi okanye ugqithiselo lwebhanki. Ngaphaya koko, kubaxhasi abatsha, i-AvaTrade ibonelela ngeendlela zokurhweba nge-e-ncwadi simahla!
Idipozithi efikelelekayo ye-100 yeedola
Imiselwe kumazwe amaninzi
Iimfumba zorhwebo ngezibini zangaphambili zekhomishini ngaphandle kweekhomishini
Imirhumo yokungasebenzi emva kweenyanga ezi-3 kungekho kurhwebo
I-EightCap yi-MT4 kunye ne-MT5 ye-broker eyaziwayo egunyazisiweyo kwaye ilawulwa yi-ASIC kunye ne-SCB. Uya kufumana ngaphezulu kwe-500+ yeemarike ezimanzi kakhulu kweli qonga - zonke zibonelelwa ngee-CFDs. Oku kuthetha ukuba uya kuba nokufikelela kwi-leverage ecaleni kwesakhono sokuthengisa okufutshane.
Iimarike ezixhaswayo ziquka i-forex, imveliso, i-indices, izabelo, kunye ne-cryptocurrencies. Akukhona nje ukuba i-Eightcap inikezela ngokusasazeka okuphantsi, kodwa i-0% ikhomishini kwii-akhawunti eziqhelekileyo. Ukuba uvula i-akhawunti ekrwada, ngoko unokurhweba ukusuka kwi-0.0 pips. Ubuncinci bediphozithi apha yi-100 yeedola nje. Unokukhetha ukuxhasa iakhawunti yakho ngedebhithi okanye ikhadi letyala, i-e-wallet, okanye ucingo lwebhanki.
3. I-Capital.com-Elona Qonga liPhambili lokuRhweba ngabaQala
Lo mboneleli we-forex olungele i-newbie upakishwe kwiiplanga ezine-CFDs kwiimarike ezingaphezu kwe-3,000 ezahlukeneyo. Oku kubandakanya izibini zeFX ezivela kumacandelo amakhulu emali, njenge-GBP / USD, i-EUR / USD, kunye ne-USD / JPY. Unokufikelela kwii-exotics ezifana ne-AUD/TRY, i-ZAR/JPY, kunye ne-MXN/JPY. Sifumene ukuba isibini i-USD/TRY iza nomndilili okhuphisanayo wokusasazeka malunga ne-0.03 pips.
Ngapha koko, uya kuqaphela ukuba kukho ukhetho olufanelekileyo lwe-exotics olunikezelwayo apha. Khumbula ngenxa yobume bemakethi ye-forex, ixabiso kunye nokusasazeka kwesibini esichaphazelekayo kuya kuguquguquka rhoqo. Ulawulo lwezemali luvela kwi-CySEC, FCA, ASIC, kunye ne-NBRB ngoko akukho nto inokukhathazeka ngayo malunga nokhuseleko. Ngaphaya koko, kukho ulwazi oluninzi lokurhweba olunokuthi luthatyathwe kwi-Capital.com. Oku kubandakanya iikhalenda zoqoqosho, iiwebinars, kunye neendaba ezahlukeneyo kunye neempawu.
Uyakukwazi ukusebenzisa isixhobo esithi 'Funda ukurhweba', esenziwe ngezifundo zorhwebo (kubandakanya ezo zichazwe ngqo kwi-forex), amacebo, utyalo-mali lokusebenzisa imali kunye noluhlu lweengcebiso zokurhweba. Ngokukodwa, siyathanda ukuba iqonga lokuthengisa kwangaphambili libonelela ngeakhawunti yedemo yasimahla. Njengamanye amaqonga orhwebo aphambili aqwalaselwe apha ngasentla, uyakwazi ukurhweba kwiimeko zentengiso yokwenyani- kodwa ngemali yeedemo.
Kukho ii-akhawunti ezi-3 ezongezelelweyo ezifumanekayo apha, eziquka i-'Standard', 'Plus', kunye 'neNkulumbuso'. Nganye iza nezinto ezahlukeneyo ezifana nokuya kuthi ga kwi-1:30 i-leverage (indawo exhomekeke kuyo), ukukhuselwa kwebhalansi engalunganga, iitshathi eziphucukileyo, uluhlu olubanzi lweemarike. Le akhawunti yokugqibela ibonelelwa ngeziganeko eziphambili, iiwebinars ezikhethekileyo, kunye nomphathi weakhawunti ozinikeleyo.
Ukutyikitya kuthatha umba wemizuzu, kwaye umrhwebi wamkela iintlobo zokuhlawula ezinje ngamakhadi etyala kunye neebhanki, ukuhanjiswa kwebhanki, kunye ne-e-wallets (kuxhomekeke kulawulo lwakho). Idipozithi encinci kwi-Capital.com yi- $ 20 kuphela- egqibeleleyo ukuba eli lixesha lakho lokuqala lokurhweba nge-forex (ubuncinci bonyuswe ukuya kwi-250 yeedola kwiidipozithi zebhanki). Ngapha koko, kuya kufuneka ufumane indawo oyifunayo yezezimali kwaye ubeke ii-odolo zomoya njengoko isiza kulula ukuhamba.
Idipozithi enobuhlobo yokuqala ye- $ 20
Inikwe ilayisenisi kwaye ilawulwa yiFCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB
Akonelanga uhlalutyo olusisiseko kubathengisi be-forex abanamava
Uwafumana njani amaQonga amaRhwebo aPhambili?
Ngabanikezeli abaninzi be-intanethi abathembisa inyanga kwintonga, kunokuba nzima ukwazi ukuba ungaqala phi ekufumaneni iqonga elifanelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, umboneleli ngamnye we-forex uya kubonelela ngenkonzo eyahlukileyo eyahlukeneyo, abonelele ngokufikelela kwiimarike ezahlukeneyo, kwaye anezakhiwo ezahlukeneyo zomrhumo endaweni.
Sinoko engqondweni, khange siyeke ukuphonononga ezonaqonga zorhwebo zihamba phambili ze-2022. Sikwadibanise apha ngezantsi uluhlu lokujonga oluncedo lokusebenzisa xa usenza uphando lwakho!
Ummiselo, ilayisensi kunye noKhuseleko
Sithinte umgaqo kulo lonke olona phononongo lweqonga lethu lokuthengisa. Kwabo abangaziyo, abarhwebi abalawulwa kwi-Intanethi kufuneka batsibe kwihupu ukufumana kunye nokubambelela kwilayisensi.
Ukuze uhlale uhambelana nemithetho ebekwe ngabasemagunyeni abangqongqo kwezezimali, abathengisi be-intanethi kufuneka:
Ngenisa uphicotho oluneenkcukacha rhoqo.
Gcina iimali zabaxumi kwi-akhawunti yebhanki eyahlukileyo.
Gcina imirhumo elubala.
Landela inkuthalo yabathengi kunye neenkqubo ze-KYC (Yazi uMthengi Wakho).
Kananjalo, kubalulekile ukunamathela kumaqonga orhwebo olulawulwa anelayisensi elinye okanye nangaphezulu kula maqumrhu alandelayo:
I-SEC, i-CFTC, kunye ne-FINRA (US).
Imizimba elawulayo ikho kwimimandla emininzi kwaye inoxanduva lokugcina indawo yokurhweba ngaphambili icocekile kwaye ilungile. Ezi zidweliswe apha ngasentla zezona zaziwa kakhulu kushishino.
Izibini ze Forex
Xa ujonga ezona ziqonga zibalaseleyo zokurhweba ngaphambili, kufuneka ucinge malunga nokuba zeziphi izibini zeFX eziza kuxhaswa. Njengoko sichukumisile, iimali zithengiswa ngababini, ezahlulwe zangamacandelo- ubukhulu, abantwana, kunye nezinto ezingaqhelekanga.
Kulabo abatsha kwindawo yemali-ezona ziqonga zibalaseleyo zokuthengisa ngaphambili ziya kubonelela ngokufikelela kwezi ndidi zilandelayo.
Olona phawu lubalulekileyo lwezibini eziphambili kukuba zihlala zibandakanya idola yaseMelika, ecaleni kwenye imali eyomeleleyo efana needola zaseCanada okanye zaseOstreliya.
Ukukunika umbono ocacileyo wezibini eziphambili ze-forex, jonga ngezantsi:
I-GBP / USD (iponti yaseBritane)
I-EUR / USD (i-Euro)
I-NZD / i-USD (idola yaseNew Zealand)
I-AUD / USD (idola yase-Australia)
I-USD / CAD (idola yaseCanada)
I-USD / JPY (yen yaseJapan)
Iibini eziphambili ze-forex zihlala ziza nokusasazeka okuqinileyo ngenxa yokufuma okuphezulu kwimarike. Ngesi sizathu, abaqalayo banokuba ngcono ukuba babambelele kolu didi lwesibini. Emva kwayo yonke loo nto, ayoyiki kangako ukuzama ukubamba izibonelelo kumaxabiso anyukayo xa ukungazinzi kwicala elisezantsi.
Nokuba yeyiphi na indlela, amaqonga orhwebo aphambili e-forex aya kubonelela ngokufikelela zonke Iibini eziphambili zemali.
Olunye udidi lwesibini lwe-forex olufanele ukuqwalaselwa kwi-newbies ngamaqela amancinci. Ngokungafaniyo nezibini eziphambili zemali, le ayizukubandakanya idola yaseMelika. Endaweni yoko, iyakwenziwa ngezinye iimali ezinamandla ze-fiat.
Ukucoca inkungu, jonga ezinye zezibini ezithandwayo ze-FX apha ngezantsi:
I-EUR / GPB (i-euro / iponti yaseBritane)
I-AUD / CAD (idola yase-Australia / idola yaseCanada)
I-EUR / AUD (i-euro / idola yase-Australia)
I-GBP / JPY (iiponti zaseBritane / yen yaseJapan)
I-EUR / NZD (i-euro / idola yaseNew Zealand)
I-EUR / JPY (i-euro / yen yaseJapan)
Njengamabini aphambili e-forex, abantwana beza nokusasazeka okuqinileyo kunye nokuhlawulwa okuphezulu- nangona kungenjalo. Isikhokelo sethu sifumene ukuba amaqonga okurhweba aphambili e-forex anikezela zonke izibini ezincinci.
Njengoko igama libonisa, izibini ezingaqhelekanga azinamanzi kwaye zinokuguquguquka ngakumbi. Kananjalo, uya kufumanisa ukuba ayizizo zonke iqonga lokurhweba kwangaphambili elinakho ukubanika.
Kulabo abangaziyo, izibini ezingaqhelekanga zihlala zibandakanya imali eyomeleleyo ye-fiat, kunye nemali enye evelayo. Okokugqibela, cinga kwimigca yepeso yaseMexico okanye ilira yaseTurkey.
Jonga uluhlu lwezibini ezingaqhelekanga ekunokubonelelwa ngazo kumaqonga amahle okurhweba ngaphambili:
I-TRY / JPY (i-lira yaseTurkey / iJapan Yen)
I-USD / HKD (idola yaseMelika / idola yase Hong Kong)
I-CHF / RUB (i-franc yaseSwitzerland / iruble yaseRussia)
I-USD / DKK (idola yaseMelika / idrone yaseDenmark)
I-CHF / ZAR (i-franc yaseSwitzerland / irandi yoMzantsi Afrika)
I-USD / CZK (idola yaseMelika / ikoruna yaseCzech)
Izibini eziguquguqukayo ezingaqhelekanga zivelisa ubutyebi obuninzi kwaye yiyo loo nto abanye abathengisi be-forex benomdla kubo. Ngelixa ukusasazeka kuya kubanzi, imbuyekezo enokubakho ihlala yenza ukuba kufanelekile. Kwakhona, ukuba usaqala, kuya kuba ngcono ukuba urhwebe ngababini abancinci kunye nabakhulu de ufumane iinyawo zakho.
Kubalulekile ukuba wazi nayiphi na imali ngaphambi kokuba ubhalise ngeqonga lokuthengisa kwangaphambili. Jonga ngezantsi kweefizi eziqhelekileyo ezibonwayo kolu shishino.
Ukusasazeka, kwabo bangaziyo, ngumsantsa ophakathi kwexabiso lokuthenga lexabiso kunye nentengo yokuthengisa.
Izinto ezintsha, jonga umzekelo okhawulezayo wokucoca inkungu:
Masithi uthengisa i-EUR / GBP
The kuthenga Ixabiso li- $ 0.86550
The thengisa Ixabiso li- $ 0.86552
Oku kukusasazeka kweepipi ezimbini
Ngokubalulekileyo, uqala olu rhwebo 2 iipipi ebomvu, njengoko le yintlawulo engathanga ngqo eqokelelwa ngumrhwebi okwi-Intanethi. Kananjalo, nantoni na phezu I-2 pips iya kuba yinzuzo yangempela kwi-forex yorhwebo.
Amaqonga orhwebo aphambili e-forex, anje nge-eToro, anikezela ngokusasazeka okuqinileyo kwepip 1 okanye ngaphantsi kwizibini ezikhulu kunye nezincinci - ecaleni kwenkonzo engenakukhomishini!
Abarhwebi abaninzi abakwi-Intanethi bahlawulisa iikhomishini ngokungena nokuphuma kwintengiso. Kananjalo, licebo elilungileyo ukufumana amaqonga orhwebo lwe-forex ngentlawulo ephantsi, kunye neendlela ezichazwe apha ngasentla.
Isikhokelo sethu safumanisa ukuba isabelo sengonyama sababoneleli be-forex bahlawulisa umrhumo wekhomishini oguqukayo. Oku kuyahambelana ngakumbi nabarhwebi bemali bexesha elifutshane.
Jonga umzekelo wosasazo olwahlukileyo apha ngezantsi:
Masithi i-broker ihlawulisa i-2% yomrhumo wekomishini.
Ubeka i-$ 1,000 yokuthenga iodolo kwi-USD/JPY.
Kufuneka uhlawule i-$ 20 ukuze ungene kwindawo yeFX (i-$ 1,000 x 2%).
Emva kokukhupha imali, urhwebo lwe-USD/JPY luxabisa i-1,400 yeedola.
Kufuneka uhlawule ikhomishini ye-2% kwakhona ukuvala urhwebo lwakho - oku kufana ne-$ 28 (i-$ 1,400 x 2%).
Lilonke, uhlawule i-48 yeedola ukungena kwaye uphume kolu rhwebo.
Imirhumo inokuthi ikhawuleze izuze kwinzuzo yakho, kwaye eyona nto ingcono kunomrhumo wekhomishini eguquguqukayo ayikho kwaphela. Kananjalo, kwiqonga lethu eliphambili lokurhweba nge-forex eToro, ngesele ugcine i-48 $ kolu rhwebo-njengoko umrhwebi engabizi khomishini.
Ezinye iifizi zokukhumbula ezona ziqonga zibalaseleyo zokuthengisa zibandakanya:
Inkxaso yobusuku: Kwabo banomdla kwi-CFDs ye-forex, uya kuba noxanduva lokuhlawula iifizi zokulala (ezibizwa ngokuba yi-swap / rollover fees). Le yintlawulo yemihla ngemihla ehlawulwayo ngosuku ngalunye oshiya urhwebo luvulekile. I-eToro ibonisa ngokucacileyo ukuba intlawulo yemihla ngemihla izakuba njani kwifom nganye yoku-odola. Imali oyihlawulayo ixhomekeke kwisibini esithengiswayo kunye nobungakanani besiteki / ubungakanani. Eli nqanaba liza kuba liphezulu kancinci kwimpelaveki.
Iintlawulo zePlatform: Ngelixa bonke abarhwebi behlukile, abanye banokuhlawulisa imali yeqonga. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ujonge ubume bemirhumo nakweliphi na iqonga lokurhweba kwangaphambili ocinga ngalo lokujoyina. Abanye banokuhlawulisa imali yenyanga okanye yonyaka ngokusekwe kwikapitali oyityalileyo - ngelixa abanye bengabizi kwanto ukujonga iakhawunti yakho.
Idiphozithi / Ukurhoxa: Enye intlawulo enokubakho ekufuneka uyiqaphele yimirhumo yedipozithi kunye nokurhoxa, ethi kwakhona, inokongeza kungekudala. Abanye ababoneleli be-forex bahlawulisa zombini iidiphozithi kunye nokurhoxa, ke uhlala ujonga kumthengisi obuzwayo.
Njengoko ubona, iifizi kunye neekhomishini kunokuba nzima ukuziqonda- ke kungcono ukhethe iqonga lokurhweba le-forex elicacileyo kwinto ekubiza yona.
Amaqonga kunye nokuSebenza
Uninzi lwabarhwebi be-forex likuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise ngeqonga layo lewebhu elinobunini. Ezi webhusayithi zihlala zenzelwe ukuba kube lula ukuzisebenzisa kubaqalayo.
Ukuba ungumthengisi we-forex onamava, uya kufuna ngaphezulu kuhlalutyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zokurhweba. Amaqonga okurhweba aphambili e-forex aya kudibana nesoftware yomntu wesithathu = njenge-MT4 / 5 okanye i-cTrader.
Ukuba awunamdla kwimbono yokuchitha iinyanga ufunda uhlalutyo lobuchwephesha okanye ukhuphele isoftware yeMT4, unokufuna ukuzama ikopi yoMrhwebi kwiToro. Sithetha ngale ndlela nje yokuthengisa i-forex kungekudala.
Izixhobo zePlatform kunye neempawu
Izixhobo kunye neempawu ezinikezelwa ngamaqonga okuthengisa arhola phambili kuya kuba lula ukuzisebenzisa kunye nenkqubo yakho yokwenza izigqibo.
Jonga apha ngezantsi ezinye zezona zilungileyo kwaye ziluncedo.
Intengiso kunye neNtengiso
Kukho izinto ezibonelelwa ngu ezinye Abarhwebi abakwi-Intanethi abaphucula ubuchule bokwenza inzuzo kwaye bakuvumela ukuba urhwebe ungakhathali. Sithintele urhwebo lwasentlalweni kunye nokukopa kuvavanyo lweqonga lethu lokuthengisa.
I-eToro liqonga lokurhweba kwezentlalo elikuvumela ukuba 'uthande', 'ulandele', kwaye 'uphawule' kwizithuba zabarhwebi be-forex. Indawo yokuma ye-broker ngokuphikisanayo sisixhobo seCopy Trader. Ngokulula, fumana umthengisi we-forex oyithandayo ngokuphanda idatha kunye nolwazi olukhoyo kuwe. Oku kubandakanya ii-asethi ezikhethwayo, idatha yokurhweba yembali, inqanaba lomngcipheko, njl.
Emva koko, khetha isixa semali oza kutyala kuso. Ke, nokuba zeziphi na iimali abazithengayo okanye abazithengisayo ziya kuboniswa kwipotifoliyo yakho-ehambelana nesixa otyalomali.
Utyala imali eyi-1,000 XNUMX kwiKopi yoMrhwebi oyikhethileyo
I-forex pro ibethe iipesenti ezi-2 zepotifoliyo yazo kwi-USD / HKD, kunye ne-3% kwi-NZD / USD
Kananjalo, iipesenti ezi-5 zephothifoliyo yakho ikwagxilwe kwezi zimbini zibini
Ukuba umrhwebi onamava uphuma kwi-NZD / USD-nawe ke uyakwenza njalo
Ukuba oku kukhokelele kwinzuzo ye-10% - ubuya kwenza okufanayo-ngesixa-mali esilingana noko utyale imali!
Njengoko ubona, oku kulinde kakhulu ukufumana ukufikelela kwiimarike zemali, ngaphandle kokuba ufunde i-ins kunye nokuphuma kohlalutyo lobugcisa ngokwakho!
Njengoko usazi, amandla okubonelela akunika ithuba lokurhweba ngaphezulu kweakhawunti yakho evumayo. Ukuba okanye ubuninzi bezinto oza kuzinikwa ziya kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo, ezinjengokuba uhlala phi, yeyiphi i-asethi okanye isibini osithengisayo, kunye nobungakanani besiteki sakho.
Bona ezinye iinkcukacha ezingezantsi:
Ukuba uvela e-US, ungarhweba ngababini abakhulu be-forex kunye nokufikelela ukuya kuthi ga kwi-1: 50
E-Australia, iinxalenye ze-Yurophu, kunye ne-UK - izibonelelo ziya kubonelelwa ukuya kwi-1: 30 kwizibini eziphambili ze-FX kunye ne-1: 20 kwiibini ezincinci.
Ukuphakanyiswa kungaboniswa njengomlinganiselo okanye ezininzi ezifana ne-1: 2 okanye x2, 1: 10 okanye x10, 1: 20 okanye x20, njalo njalo
Ukunyuselwa kwe-1: 30 kuthetha ukuba unokubonyusa isigxina se- $ 100 kwisibini esikhulu ukuya kuthi ga kwi-3,000
Kananjalo, i-100 yezigxina kwisibini esincinci okanye esingaqhelekanga sinokubhalilwa ukuya kuthi ga kwi-2,000 yeedola, ngokongeza u-1: 20
Ngokunyusa isikhundla sakho ngokunyusa, nawe uya kukhulisa inzuzo if urhwebo luphumelele. Oku kukwathetha ukuba ukuba isibini semali siya kwelinye icala, ilahleko yakho iyakwandiswa. Ngale nto ithethwayo, kufuneka ulumke xa usebenzisa amandla kwiqonga lakho le-forex elikhethiweyo.
Xa ujonga awona maqonga aphambili okurhweba ngaphambili- kuyacetyiswa ukuba ubone ukuba zeziphi izalathi zobugcisa (ukuba zikhona) eziza kufumaneka kuwe.
Ngaphandle kwezalathi kunye neetshathi ezibonisa imeko kunye notshintsho lwamaxabiso edlulileyo nolwangoku- unokuphosa nje idart. Kungenxa yokuba izikhombisi zobuchwephesha zikwenza ukuba uthathe izigqibo ezinolwazi malunga nokuba leliphi icala elinokuya kwisibini.
Ukuthatha inxaxheba kuhlalutyo lobuchwephesha kuya kukubona ufunda ivolumu, ukungabinamali, ukungazinzi, amaxabiso, kunye nokunye ecaleni kwezixhobo zokudweba kwitshathi. Njengoko besesitshilo, amanye amaqonga orhwebo aphambili e-forex akuvumela ukuba uqhagamshele iakhawunti yakho kwi-MT4 kunye nokufikelela kwiimfumba zezixhobo, izikhombisi kunye neetshathi.
Iidipozithi, ukuTsala imali kunye neNtlawulo
Ukuba unendlela ethile yokuhlawula engqondweni, kuya kufuneka ujonge ukuba yintoni umboneleli ekubhekiswa kuyo ayamkelayo. Umzekelo, uninzi lwabathengi bakwi-Intanethi ngokwesiko bamkela kuphela ukuhanjiswa kwebhanki.
Ngokukodwa, nangona kunjalo, ukuhanjiswa kweebhanki kungathatha phakathi kweentsuku ezimbini kunye neveki ukucacisa kwiakhawunti yakho yorhwebo, kwaye ke oku kuya kulibazisa iinzame zakho ngelinye ixesha. Amaqonga okurhweba aphambili e-forex amkela iindlela zokuhlawula ezikhawulezileyo kunye nezanamhlanje ezinje ngamakhadi etyala kunye neebhanki, kunye nee-wallet.
I-eToro yamkela konke oku kungentla, kubandakanya iPayPal, iSkrill, kunye neNeteller. Lo broker uhlawula umrhumo wotshintshiselwano ukuba awuyixhasi iakhawunti yakho usebenzisa iidola zaseMelika. Nangona kunjalo, le yi-0.5% kuphela, kwaye kufanelekile ukukhumbula ukuba umboneleli ubonelela nge-0% ikhomishini kuyo yonke imisebenzi ye-forex!
Ukuba ungumrhwebi onamava kwaye sele uyazi i-ins kunye nokuphuma kolu shishino, unokufuna ukutsiba izixhobo zemfundo. Nangona kunjalo, kwii-newbies, ezo zinto ziyinxalenye ebaluleke kakhulu yokufunda iintambo.
Umrhwebi ngamnye uya kwahluka. Nangona kunjalo, ngalinye lamaqonga okurhweba phambili e-forex enza ukuba uluhlu lwethu lubonelele ngolunye uhlobo lomxholo wemfundo-ejolise ekuncedeni abathengisi be-forex abangenamava.
Ukuqalisa ngeQonga lokuRhweba ngeMali ePhambili- Ukuhamba
Ngokukhawuleza emva kokuba uthathe isigqibo sokuba leliphi iqonga lokurhweba le-forex elungele iimfuno zakho-ungaqala.
Kule ndlela, sibonisa indlela ongena ngayo kwiCapital.com
-Njengoko iqonga likuvumela ukuba urhwebe inqwaba yezibini zangaphambili ze-forex.
Inyathelo 1: Bhalisa iAkhawunti
Yiya kwi-Capital.com kwaye ucofe 'Rhweba ngoku'. Gcwalisa igama lakho kunye nezinye iinkcukacha - njengoko kubonisiwe kwibhokisi yokubhalisa.
Oku kunokwenziwa kwifowuni yakho okanye kwiwebhusayithi ephambili yedesktop.
Inyathelo 2: Qinisekisa isazisi sakho
Ngokwe-KYC nganye, kuya kufuneka uqinisekise ukuba ungubani. Inkunzi.com
yamkela iphepha-mvume lokuqhuba okanye incwadana yokundwendwela njengesazisi sefoto. Xa kuziwa kubungqina bedilesi, ungasebenzisa ibill yokusetyenziswa kutshanje okanye ingxelo yebhanki esemthethweni- nokuba ikopi eskenweyo okanye eyidijithali ilungile, ukuba nje icacile.
Ungakushiya ukulayishwa kwamaxwebhu de ube uqhubeka ngakumbi emgceni. Nangona kunjalo, nceda uqaphele oku kufuneka kugqitywe ngaphambi kokuba wenze isicelo sokurhoxa (okanye ufake ngaphezulu kwe- $ 2,250).
Ukwenza idipozithi kwi-Capital.com kulula, njengoko kukho iintlobo zeentlawulo onokukhetha kuzo.
Faka nje isixa onqwenela ukusifaka kwiakhawunti yakho kwaye ukhethe indlela oyikhethileyo yokuhlawula kwinto oyifumanayo.
Inyathelo 4: Khangela i-Forex Pair
Ngoku ukuba iakhawunti yakho iqinisekisiwe kwaye yaxhaswa ngezimali unokufumana isibini sangaphambili sokurhweba.
Qala ngokuchwetheza nayiphi na isibini ofuna ukuyithengisa kwibhokisi yokukhangela-kwaye ucofe u-'Rhwebo 'xa uyibona. Kumzekelo wethu, sifuna ukurhweba nge-euro xa kuthelekiswa nedola yase-Australia.
Ukuba awusazukuthatha isigqibo, cofa 'kwiiMarike zoRhwebo' kwicala lasekhohlo, ulandelwe 'yimali'. Ngeli xesha zonke iimarike ze-forex ezikhoyo ziya kuboniswa kwiscreen sakho.
Inyathelo 5: Beka uRhwebo
Emva kokucofa 'Urhwebo' ecaleni kweebhendi ozikhethileyo, kuya kuvela ibhokisi yeodolo.
Into yokuqala ekufuneka yenziwe kukuthatha isigqibo phakathi kwe kuthenga kwaye thengisa Umyalelo. Ukuba ucinga ukuba inqanaba lotshintshiselwano liya kuthi kuvuka - khetha uku kuthenga. Ngenye indlela, ukuba ufuna ukuya kufutshane- khetha thengisa.
Ngena kwisibonda sakho, ilahleko yokumisa, kunye nezixa zokuthatha inzuzo. Emva koko, xa wonwabile ngamangenelo akho - unokucofa u-'Vula uRhwebo '. Ngokwenza njalo, iCapital.com iya kwenza iodolo yakho ngokufanelekileyo!
AmaQonga amaRhwebo aBalaseleyo-Ngaba sisiGwebo?
Ngeeyure zokurhweba ezinomtsalane kunye nokuhlawulwa okuphezulu, ayimangalisi into yokuba izigidi zeedola ezixabisekileyo zitshintsha izandla mihla le. Kananjalo, kukho amakhulukhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi abadibana kwindawo ephezulu kwisithuba.
Amaqonga okurhweba aphambili e-forex aya kulawulwa, anike ukusasazeka okuqinileyo kwimfumba yezezimali, kwaye ube newebhusayithi elungele umsebenzisi. Inkunzi.com
upasa ngemibala eqaqambileyo kulo mba. I-broker ilawulwa yi-FCA, i-ASIC, i-CySEC, kunye ne-NBRB kwaye ibonelela ngokufikelela kwii-pairs ze-forex ezingaphezu kwe-50 kunye nokusabalalisa okukhuphisanayo.
Lo mrhwebi uhloniphekileyo uhlawulisa ikhomishini ye-ZERO kwaye unikezela ngeempawu ezinje ngeNtengiso yokuKopa, kunye nomxholo oluncedo wemfundo wabaqalayo. Qalisa kwimizuzu engaphantsi kwe-10 kwaye uzame iakhawunti yasimahla ye-demo nge-100,000 yemali eyiyo!
Ukuxhasa amanyathelo akho okuqala xa uthengisa nomrhwebi zama ukusayina kunye nenkonzo yemiqondiso ye-forex yasimahla. Oku kuya kukubonelela ngolwazi lokuba xa kuvela ithuba elifanelekileyo lokurhweba ngaphandle kokuba yingcali kuhlalutyo lobuchwephesha. Unokujoyina Eyona miqondiso iphambili ye-forex yocingo ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu simahla.
Leliphi elona qonga liphambili lokuthengisa labaqalayo?
Isikhokelo sethu sifumanise ukuba elona qonga liphambili lokurhweba labasaqalayo yi-eToro. Umrhwebi okwi-Intanethi ulawulwa, unikezela ngeemfumba zezibini zangaphambili kunye nokusasazeka okuqinileyo, isuti yorhwebo ezele yimixholo yemfundo yee-newbies, kwaye ungaqala ngemizuzu!
Ngaba ndingaba sisityebi ngokuthengisa i-forex?
Nokuba ungazityebisa okanye akunjalo kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo-njengesixa ozimiseleyo okanye onokukwazi ukusifaka. Ngokubalulekileyo, awuyi kwenza mali ngaphandle kokuba uqikelele ngokuchanekileyo ukunyuka okanye ukwehla kwexabiso, kwaye wenze iodolo yokuhambelana kunye nomrhwebi we-intanethi okhethileyo.
Yeyiphi eyona nqonga yokurhweba kwangaphambili ye-forex?
Eyona iqonga lokurhweba ngeenxa zonke le-forex ye-2022 yi-eToro. Umrhwebi okwi-Intanethi ulawulwa yi-FCA, i-CySEC, kunye ne-ASIC, ebonelela ngaphezulu kwezibini ezingama-50 ezibini ezinokuthengiswa ngaphandle kwekhomishini, kwaye kulula ukuhamba kuzo zonke iiseti zobuchule. Ngapha koko, ihlala ithatha imizuzu engaphantsi kwe-10 ukubhalisela ukusebenzisa amakhadi etyala / okutsala imali okanye ii-e-wallets ezinje ngeSkrill kunye nePayPal.
Zeziphi iimetriki endifuna ukujonga xa ukhetha iqonga lokurhweba kwangaphambili?
Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba iqonga lokuthengisa kwangaphambili lilawulwa kuqala kwaye liphambili. Kuya kufuneka ujonge ukuba zeziphi izibini ze-forex ezikhoyo, yeyiphi imirhumo kunye neekhomishini ezilindelwe kuwe, kwaye zeziphi iindlela zokuhlawula ezamkelweyo. Kukwafanelekile ukujonga ukuba zeziphi izixhobo zokurhweba eziza kubakho kwaye nokuba ungafikelela kwiakhawunti yeedemo yasimahla ukuziqhelanisa neendlela zokuthengisa zangaphambili.
Ngaba ndingaluqala urhwebo lwe-forex nge- $ 100?
Ixabiso elincinci liza kwahluka phakathi kwamaqonga okurhweba ngaphambili, ke kungcono ufunde lonke ulwazi kumrhwebi ngamnye. Kwi-AvaTrade, umzekelo, idipozithi encinci yi- $ 100 nje. KwiCapital.com, oku kungaphantsi kweedola ezingama-20.